Sina: Tsy hatahorana ve ny “pastèque mipoaka”? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jolay 2011 20:04 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, বাংলা, русский, Español, srpski, 日本語, English
Volana vitsy lasa izay dia nilaza ny olana iainan'ireo mpamboly ao amin'ny faritanin'ny Jiangsu ny media sinoa, olana izay nilazan'izy ireo fa mipoaka ny pastèque amboleny vokatry ny fampiasana zezika sy akora simika tsy an-kiato. Tamin'ny 5 jolay 2011, nanamarina ny minisiteran'ny fambolena fa ny akora ampiasaina hampitomboana haingana ny pastèque dia tsy ahitana olana na dia kely aza satria kely fotsiny ny fako simika misy poizina avelany.
Araka ny voalazan'i Hutong tao amin'ny lahatsorany [zh], mipoaka ohatry ny baolina eny an-tanimboly ny pastèque. Ny akora simika nampiasaina hampitomboana haingana ny fambolena azy dia ny Forchlorfenuron, izay ara_dalàna ihany koa any Etazonia. Ary satria mampalemy ny voankazo izy ity dia tsy maintsy ampiarahana amin'ny akora simika hafa manome loko sy manamafy ny voankazo.
Indro ny famintinana ny fanadihadihana navoakan'i Caijing tao amin'ny Weibo [zh]:
[Minisiteran'ny fambolena: tsy atahorana ny akora simika hanafainganana ny fitombon'ny pastèque ary kely fotsiny ny fako simika avelany] Tamin'ny 5 jolay, nitondra valiny ofisialy mahakasika ny “tranga niseho vokatry ny fampiasana akora simika fanafainganana ny fitombon'ny pastèque” ny solontenan'ny minisiteran'ny fambolena. Tao amin'ny fanadihadihana nataony no nanamarinany fa kely fotsiny ny fako simika aterak'ity fanafainganana ity. Raha manaja tsara ny fatra tokony hampiasaina ny mpamboly dia tsy misy tokony hatahorana eo amin'ny ara-tsakafo. Raha foanana tsy azo ampiasaina intsony ity fampitomboana ity dia ny tontolon'ny fambolena amin'ny ankapobeny mihitsy no ho sahirana. Fanadihadihadihana amin'ny antsipiriany hita ao amin'ny http://t.cn/apCbAA [zh]
Ankoatra izay, mitsikera ny tsy fandraisana andraikitra eo anivon'ny minisiteran'ny fambolena ny mpiserasera namaky ny fanambarana nataon'ny minisiteran'ny fambolena. Indreto ny sasany amin'ireo fanehoan-kevitra navoaka tao amin'ny andiam-baovao [zh] tao amin'ny Sina Weibo: